အီးမေးလ်သတင်းလွှာ၏ခန္ဓာဗေဒ | Martech Zone
ညာဘက် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ သင်၏လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များပိုမိုရယူနိုင်မှုကိုရရှိပြီးသင်၏စာကိုပိုကြီးသောပရိသတ်ရှေ့တွင်ထားနိုင်သည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ စာဖတ်သူများနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အဖိုးတန်သောအရာများကိုပံ့ပိုးပေးရန်အီးမေးလ်များသည်အထူးပြင်ဆင်ထားသည်။
အီးမေးလ်သတင်းလွှာ (သို့) အီး - သတင်းလွှာများသည်အပြုသဘောဆောင်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. သူတို့သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသတိပြုမိစေရန်ကူညီသည်။
သင်၏အီး - သတင်းလွှာ၏ကြိမ်နှုန်းကိုအပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ရန်သီးခြားစည်းမျဉ်းမရှိပါ။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏စာရင်းသွင်းသူများအနေဖြင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အောင်မြင်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်နွှယ်နေပြီးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ယာဉ်မောင်းခြင်းမောင်းနှင်ပေးသည် - ၎င်းသည်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏တည်ရှိမှုကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြင့်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများကိုပိုမိုမြင်နိုင်သည်။
Opt Outs များကိုစစ်ထုတ်ခြင်း - ကောင်းသောအီးမေးလ်သတင်းလွှာကစာဖတ်သူများအားစာများလက်ခံခြင်းကိုငြင်းပယ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းအားကိုမည်သူ ဦး ဆောင်နေသည်ကိုသင်သိရန်ဆိုလိုသည်။
သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များ၏စိတ်ထဲတွင်နေပါ - ပုံမှန်အီးမေးလ်စာစောင်များသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားစဉ်ဆက်မပြတ်သတိပေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်ဖောက်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိနေရန်ကူညီသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း - အီးမေးလ်စာစောင်များသည်အသစ်သောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဖောက်သည်များအားနောက်ဆုံးအခြေအနေပေးရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
Conversio အတွက်အစွမ်းထက်ကိရိယာများn - သတင်းလွှာရယူသူများအတွက်သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့ကိုသင်ထံမှ ၀ ယ်ရန်အားပေးပါလိမ့်မည်။
Mobile Friendly ကိုရယူခြင်း - လူအများစုကသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်တွေကိုစမတ်ဖုန်းတွေမှာဘယ်လိုစစ်ဆေးသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်မိုဘိုင်းတုန့်ပြန်မှုပုံစံကိုမှတ်သားထားဖို့သင့်ရဲ့အီးမေးလ်သတင်းလွှာကိုဒီဇိုင်းဆွဲသင့်တယ်။ ကော်လံတစ်ခုစီသည်မိုဘိုင်းလိုက်ဖက်မှုသေချာစေရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ပေးပို့သူအမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ - အီးမေးလ်လိပ်စာတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်ကိုအသုံးပြုပြီးပို့သူရဲ့အမည်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအမည်များကို spam အဖြစ်သတင်းပို့နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။
အကြောင်းအရာလိုင်းအီးမေးလ် - အားလုံးဒီတစ်ခုလိုင်းမှဆင်းလာ! မှန်ကန်သောဘာသာရပ်လိုင်းသည်သင်၏ E-newsletter ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်သတိမပြုမိရန်သင့်အတွက်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသင့်သည် (စာလုံးရေ ၂၅ မှ ၃၀ အထိကိုမိုဘိုင်း application အများစုတွင်ပြသထားသည်) ။ စိတ် ၀ င်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုဆွဲဆောင်ရန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်သင့်လက်ခံသူ၏အမည်ပါရှိလျှင်၎င်းကိုသူဖွင့်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
Pre-Header နှင့် Preview Panel များ - Pre-header သို့မဟုတ် snippet စာသားများကိုများသောအားဖြင့်သင့်အီးမေးလ်၏အစမှအလိုအလျောက်ဆွဲထုတ်သည်၊ ယခုတွင်၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးကမ်းလှမ်းမှုများသို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးများကိုပြသရန်သင့်အတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူပဲ၊ preview pane မှာပြထားတဲ့ content တွေကိုလည်း customize လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့စက်မှာအီးမေးလ်ဖွင့်တဲ့အခါဒီဟာကအသုံးဝင်တယ်။
ဆွဲဆောင်မှုခေါင်းစဉ် - ပစ်မှတ်ထားသောဖောက်သည်များကိုစိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားစေရန်မှတ်မိလွယ်သောခေါင်းစီးခေါင်းကြီးများဖန်တီးပါ။ ထိုနည်းတူပင်ခေါင်းစဉ်ခွဲအားလုံးသည်စာဖတ်သူ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူရန်နှင့်စာကိုဖြတ်သန်းသွားစဉ်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
တစ် ဦး ကတသမတ်တည်းဒီဇိုင်း - သင်၏စာဖတ်သူများသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အားသတင်းလွှာပေါ်ရှိပုံစံ၊ အရောင်များနှင့်လိုဂိုများမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ သင်၏ဒီဇိုင်းကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခြင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်မကောင်းပါ။
အကြောင်းအရာဘုရင်ဖြစ် - အကယ်၍ သင်၏စာဖတ်သူများအားသူတို့၏ subscriptions ကိုဆက်လက်ထားရှိလိုပါက၎င်းတို့ကိုအလွန်ကောင်းသည့်အကြောင်းအရာများပေးရန်လိုအပ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်စာဖတ်ခြင်းသည်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့ရုံသာမကအခြားသူများကိုလည်းဝေမျှလိုသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်မျှသာ၊ သိကောင်းစရာနှင့်လွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သင်၏စာဖတ်သူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လက်ရှိစျေးကွက်စာရင်းအင်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှုခင်းများကိုထည့်သွင်းပါ
တစ် ဦး ကပြတ်သား Layout - အကြောင်းအရာသည်မည်မျှပင်ကောင်းမွန်ပါစေ၊ ပုံစံမကျခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်းကစာဖတ်သူ၏အာရုံကိုပျောက်စေပြီးမှန်ကန်သောသက်ရောက်မှုကိုမဖန်တီးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းလွှာတစ်လျှောက်လုံးမရှုပ်ထွေးစေဘဲကဏ္orများသို့မဟုတ်ကျည်ဆံအချက်များအဖြစ်ကောင်းစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သင်၏အချက်သည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအတွက်အတိုချုပ်နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
CTAs နှင့်အသုံးဝင်သောလင့်ခ်များ - သင်၏ခေါင်းစီးများ၊ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မည်သည့်ရုပ်ပုံများကိုမဆိုကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။ ဆောင်းပါးများ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်များအတွက်စာဖတ်သူများအားသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသော“ ဆက်ဖတ်ရန်…” လင့်ခ်များကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ယခင်ကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းသတင်းလွှာများသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများတွင်ပါ ၀ င်သောခေါ်ဆိုမှုများသည်ထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးသင့်စာဖတ်သူများအတွက်ရှင်းလင်းရမည်။
အောက်ခြေ - ၎င်းတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အပြည့်အစုံ၊ သင်၏လူမှုမီဒီယာများနှင့်ဝဘ်လင့်များအားလုံးပါ ၀ င်သင့်သည်။ The မှာယူမှုဖျက် လင့်ခ်သည်သင်၏သတင်းလွှာ၏အောက်ခြေသို့လည်းရောက်ရှိသွားသည်။
အဆိုပါ InboxGroup သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အနိုင်ရသောအီးမေးလ်များနှင့်အီးမေးလ်သတင်းလွှာများတည်ဆောက်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့်သင်၏အားလုံးသော -In-one အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: အီးမေးလ်ခေါင်းစဉ်အီးမေးလ်အပြင်အဆင်အီးမေးလ်ကသတင်းလွှာအီးမေးလ် preheaderအီးမေးလ်ပို့သူလိပ်စာအီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းမိုဘိုင်းအီးမေးလ်သတင်းလွှာ
28:2019 pm မှာဇွန် 3, 42
အကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စာပို့စနစ်ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါပွင့်လင်းနှုန်းကောင်းတွေရနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့စာရင်းတော်တော်များများကမဖွင့်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါသူတို့ကိုများများမေးလ်ပို့နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးဖို့ငါကြိုးစားနေတယ်။
1:2019 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 52
မင်္ဂလာပါ၊ မိုဇီ၊ ဖွင့်မဖွင့်ထားသောအီးမေးလ်များသည်အမှန်တကယ်အ ၀ င်စာပုံးသို့ရောက်မလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များကဲ့သို့ကိရိယာတစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် 250ok သင်၏အချို့သော ISP များက junk folders များသို့တွန်းပို့ခံရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင်၏ inbox ပေးပို့နိုင်မှုနှုန်းကိုစစ်ဆေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဲ့သို့ကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည် ဘယ်တော့မှမ ထိုအီးမေးလ်လိပ်စာများမှန်ကန်မှုရှိမရှိသိရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသာထင်ရှားသောမဖွင့်ထားသောနှုန်းထားများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ခါသုံးသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိသောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြabilityနာများနှင့်ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အစီရင်ခံခြင်းခံရပြီးနာမည်ပျက်စာရင်းဝင်အချို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုများသည်အချို့ ISP ၏ spam filter များကိုအစပျိုးစေသည်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။